‘बा! बस भरोस गर्नुस, धैर्यता राख्नुस्’ : एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको बुवालाई चिठी - Namaste Post
‘बा! बस भरोस गर्नुस, धैर्यता राख्नुस्’ : एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीको बुवालाई चिठी
प्रतिमा पौडेल २०७६, २३ मंसिर सोमबार ०८:३० 0
घरमा सबैजना सकुशल नै हुनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छु। होलान मनमा भारी ती साहुको ऋणको,घर धरौटी राखी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजको । तर नआत्तिनु ऋण लागोस्, दिन नलागोस् ।
म पनि यहाँ आरामै छु । पछिल्लो समय भदौ मसान्ततिर पुलिसको लाठीचार्जमा परि नाकको जाली फुट्या थियो, हालमा सानो चोट लाग्याथियो, लामा चारवटा मात्रै टाँका लगाउनु प¥या हो । अस्ती मंसीर १९ को लाठी चार्जमा पुलिसको जुत्ताले टेकिँदा दाहिने गोडाको नङ एकिएथ्इो, त्यो दिनको नाथ्री फुटाइमा त्यती देखे, शायद दोस्रोपटक भएर होला । त्यही पनि आजको मितिमा धेरै नै सञ्चो भै सक्याछु । आत्तिनुपर्ने केही छैन ।
मेरो पढाइको सुर्ताै पटक्कै नलिनु । हजुरको दिक्षाले हजुरको आशिर्वाद अनि उत्साहले डाक्टर बन्ने आफ्नो सपना साकार गर्न नौँ डाँडापारी हजुरलाई लाखौँको ऋण अनि अरबौँ अरबका ती अमुल्य भरोसा दिलाई पढ्न आएकी म सपना अधुरै पारेर त पटक्कै फर्कन्न ।
धन्यवाद त साह्रै सानो शब्द होला त्यहीपनि नभनिरहन सकिन । यहाँको दिशाले म आज हाम्रो देशको मेडिकल शिक्षण प्रणाली अनि माफियाा सञ्जाललाई थोरै पढ्नेअनि यसभित्रका अनगिन्ति गन्हाउने कथन बुझ्ने भएकी छु । आज साढे चार महिना भइसक्यो,यो विकृतिविरुद्ध आवाज चर्काउँदै,लडदा–लडदै सडकमा पुगेर चिच्याउन थालेको पनि ।
म मात्र होइन, मेरा सम्पूर्ण साथीहरु एकजुट छौँ । राम्रो काम गर्दा आमाबुबा हाम्रो साथमा नै हुनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
न्इाय र अधिकारको लागि लड्न नडराउन, विकृतिविरुद्ध चुप बस्नु विकृति फैलाउनुभन्दा पनि ठूलो अपराध हो भन्ने यहाँको आशावाणी मानसपटलमा गुञ्जयमान गराउँदै यो संघर्षमा लड्दै छु । मेरै पढाइको खर्चको लागि हाुले ऋण त छर्दैथियो,आमाको माडबारी र ढुङ्ग्री बेच्नै नपर्ने रहेछ । यहाँ त फगतमा नै नोट अशुल्दा रहेछन् । हो, त्यसैका लागि लड्दै छु ।
संघर्षको बाटो साँच्चै अप्ठेरो रहेछ बुवा, म देश बुझ्दै छु ।
यहाँ त न्याय माग्दा अन्याय पाइँदो रहेछ, आवाज उठाउँदा लाठी पायँद्यो रहेछ, सहकार्य खोज्ला धकालेर पल्लो पट्टी फ्याकिँदो रहेछ । चार रुपैयाँको जागिरमा पलिस पनि बिक्दा रहेछन् । माफियाको जालमा मानवतामा पनि जेलिँदो रहेछ । विकृतिविरुद्ध बोल्दा जुत्ताकै माला लगाइदो रहेछ, सत्य बोल्दा ठट्यौली भन्दा रहेछन् । नोटमा त यहाँ दुनिया किनिने रहेछन् । अर्काको सर्वश्व लुटी आफै ओढ्दा रहेछन् । चिल्ला गाडीभित्र चिप्ला बोली, डेमानको घरभित्र ठूटो बामपुड्के नैतिकता पो भेटिदो रहेछ ।
म आश्चार्य छु, आज अचम्मित छु, त्रसित अनि थोरै दमनमा छु तर म दृढ छु ।
मैले सुनेको र मैले देखेको देशको मानचित्रले मलार्य अनौठो तरङ्ग दिएको छ । तर बुवा, अतात्तिनुस, ‘सुखमा नआत्तिनु, दुःखमा नमात्तिनु’ भन्ने भनाइ म सजिलै कहाँ भुल्छु र ? मेडिकल शिक्षा प्रणालीका व्यापक विकृति विरुद्धको हाम्रो संघर्षमा हजुरकी छोरीधेरैअघि बढेकी छे । अन्ययायविरुद्ध लड्न सिकिसकेकी छे । संघर्ष उसको रणनीति अनि सफलता उसको एक मात्र लक्ष्य बनेको छ ।
त्यसो नभन्नु बुवा, कि छोरीको पढाइ डामाडोल भयो । यहाँले नै भन्नु भएको होइन, देशभक्ति त मर्दैन चुथ्थै देश भएपनि । मेरो पढाइमा होस् धेरथोर उचरचढाव ।किन नरुमलियोस् २÷४ घडि ? तर अधिकार र न्यायको लागि म कसरीनलडुँ ? विकतिविरुद्ध म कसरी मौन बसुँ ??
म हिँड्दै घर फर्किदै छु बुवा । संघर्षको काँडेबाटो सिध्याएर आउँदैछु । विकृतिविरुद्ध आवाज उठाइ सचेतनाको विगुल फुक्दै आउँदैछु । माफियाको भण्डाफोर गरेर आउँदैछु । छिट्टै डाक्टर बनेर आउँदैछु । यहाँ ऋणको सावाँ ब्याज कमाएर आउँदैछु । बस भरोस राख्नुस, धैर्यता राख्नुस् ।
एमबीबीएस अध्ययनरत एक विद्यार्थीले इमेल गरेको पत्र बिना कुनै सम्पादन प्रकाशन गरेका छाैँ । धन्वाद ।